सरकारका दुई उपसचिव सहित १३ अधिकृतहरु बेपत्ता | Samabesi Khabar
सरकारका दुई उपसचिव सहित १३ अधिकृतहरु बेपत्ता
सरकारका दुई उपसचिव समेत १३ जना अधिकृतहरु बेपत्ता भएकाछन् । बेपत्ता हुने यि अधिकारीहरु मध्ये केही त बिगत २४ बर्षदेखि नै बेपत्ता भएका भएपनि यिनको खोजीमा सरकारले कुनै चासो देखाएको छैन । आफ्नै मातहतका कर्मचारी बिना सुचना हराउँदा समेत सरकारले यिनको खोजीमा चासो नदिएकै कारण यतिबेला कर्मचारी क्षेत्रमै चर्चा परिचर्चा शुरु भएको छ ।
सरकारको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका दुई उपसचिवसहित १३ जना अधिकृत वर्षौंदेखि बेपत्ता भएका हुन् । काम छाडेर बेपत्ता भएका आफ्नै कर्मचारीको सोधी खोजीमा स्वयं मन्त्रालय पनि बेखबर जस्तै देखिएको छ । लामो समयदेखि सम्बन्धित कामको जिम्मेवारी प्राप्त अधिकारी बेपत्ता हुँदा त्यो पदमा सरकार वा मन्त्रालयले नयाँ नियुक्ती समेत गरेको छैन । कृषि तथ पशुपक्षी मन्त्रालय श्रोतले बताए अनुसार, बेपत्ता भएका ति अधिकारीहरु यतिबेला अमेरिका, बेलायत, अस्ट्रेलियालगायत देशमा सुखसयलका साथ रहेकाछन् । सरकारी रकम खर्च गरेर अध्ययन र तालिमका लागि भन्दै विदेशीएका उनिहरु अध्ययन र तालिम सकिएपछि पनि स्वदेश नफर्कीकन उतै जागिर खाएर बसेको मन्त्रालय श्रोतले बताएको छ । मन्त्रालयका यस्ता बेपत्ते केही अधिकारीहरु सेवा निवृत्त समेत भईसकेकाछन् । तर यस सम्बन्धि कुनै अभिलेख मन्त्रालयमा नरहेको पनि समाचार श्रोतले जनाएको छ ।
कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको पशु सेवातर्फका भेटनरी अधिकृतहरू बेपत्ता भएका हुन् । बेपत्ता हुनेमा उपसचिवस्तरका वरिष्ठ पशु चिकित्सक खड्ग सिंह विष्ट २०७० बैशाख २४ गतेबाट र विश्वचन्द्र घिमिरे २०५७ सालबाटै बेपत्ता भएका हुन् । यसैगरी बेपत हुने अन्य अधिकारीहरु मा पशु चिकित्सक सुवास शिवाकोटी २०७० सालदेखि नै बेपत्ता छन् । अन्य पशु अधिकृतहरूमा विनु श्रेष्ठ, विष्णुबहादुर अधिकारी, कृष्णप्रसाद कँडेल, अञ्जनकुमार चालिसे, तोयानाथ बराल, तुलसीराम थापा, यादव बजगाईंलगायत छन् । मन्त्रालयका अनुसार केही अधिकृत २०५२ सालदेखि नै बेपत्ता भएका छन् । निजामती सेवा ऐनअनुसार बिनासूचना लगातार ९० दिनसम्म कार्यालयमा अनुपस्थित हुने कर्मचारीलाई सेवाबाट हटाउने प्रक्रिया थाल्नुपर्छ । तर, कृषि मन्त्रालयको प्रशासनिक नेतृत्वले त्यस सम्बन्धमा कुनै पहल नै नगर्दा ती कर्मचारीमाथि कारबाही हुन नसकेको हो । तर, मन्त्रालयको प्रशासन महाशाखाले भने लामो समयदेखि बेपत्ता रहँदै आएका ती अधिकृतको खोजतलास गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
महाशाखाका प्रमुख सहसचिव डा. नारायण रेग्मीले २०-२२ वर्षदेखि सम्पर्क्विहीन अधिकृतलाई पदबाट हटाउने प्रक्रिया थालिएको जानकारी दिए । उनले लामो समय अधिकृृतहरू सम्पर्क्विहीन हुँदा पद ओगटिएको र नयाँ भर्ना गर्न नसक्दा काम प्रभावित हुन पुगेको बताए । ‘अब लामो समयदेखि बेपत्ता भएका सबैलाई हटाएर रिक्त पद कायम गरिने र रिक्त पदमा नयाँ भर्ना प्रक्रिया थालिने प्रशासन महाशाखा प्रमुख डा. रेग्मीले जानकारी दिए । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका कर्मचारी प्रशासन महाशाखा प्रमुख सहसचिव बाबुराम अधिकारीले वर्षौंअघिदेखि कर्मचारी बेपत्ता हँुदा कारबाही नगर्नु कृषि मन्त्रालयको त्रुटि भएको बताए । उनले मन्त्रालयले छिटोभन्दा छिटो सबै कर्मचारीको नाममा सार्वजनिक सूचना जारी गरी कारबाहीस्वरूप हटाउने प्रक्रिया थाल्नुपर्ने जनाए ।-विमर्श साप्ताहिकबाट